‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’को मूल मन्त्र बोकेको प्रहरी ‘आपराधिक सेवा सुरक्षणम्’ नबनोस् ! « News24 : Premium News Channel
२१ आश्विन २०७५, आईतवार
‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’को मूल मन्त्र बोकेको प्रहरी ‘आपराधिक सेवा सुरक्षणम्’ नबनोस् !
काठमाडौं । कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुऱ्याउनुपर्ने प्रहरी नै अहिले विवादमा तानिँदै आएको छ । आपराधिक घटना निर्मूल पार्ने जिम्मा पाएको प्रहरी नै यसरी आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु र अापराधिक घटना लुकाउन उद्यत हुनुले प्रहरी संगठनप्रति जनताकाे विश्वास गुम्न थालेकाे छ । सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । लगातार आपराधिक घटना भइरहनु र आपराधिक घटनामा प्रहरी नै संलग्न हुनु, यसले गर्दा जनताले असुरक्षा महसुस गर्नुका साथै आतङ्कित र आक्रोशित हुनु प्रहरी संगठनकै लागि पनि विडम्बनापूर्ण बन्ने छ ।
३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम हत्या काण्ड र निर्मला पन्त हत्या काण्डमा मुछिएपछि झनै प्रहरीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुँदै आएको छ । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अाफै संलग्न रहेका प्रहरी अधिकृतहरू भटाभट छुट्न थालेका छन् । एक बेला सर्वत्र चर्चामा आएको सुन तस्करी प्रकरण बिस्तारै सेलाउँदै आउन थालेपछि प्रहरी अधिकृतहरू छुट्न थालेका हुन् । यता कञ्चनपुरमा १३ वर्षकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको साढे दुई महिना पुगिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन । घटनाकाे वास्तविकता बाहिर ल्याउन असफल भएकाे प्रहरीसँग न्यायकाे अाश त कहाँ हाे कहाँ उल्टै घटनामा प्रमाण नस्ट गर्न र अपराधी लुकाउन लागिपरेकाे अाराेप लागेकाे छ । कञ्चनपुर घटनालाई आधार मानेर हेर्दा नेपाल प्रहरीबाट धेरै लापरबाही भएको छ र यसले जनतामा अविश्वास झनै बढाएकाे छ ।
प्रहरीले नै घुस खाएपछि अनि प्रहरी नै अापराधिक घटनामा संलग्न देखिन थालेपछि प्रहरीले गरेका कैयाैँ राम्रा काम पनि ओझेलमा परेका छन् । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण तथा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । अब यो प्रश्नचिह्न मेट्न र जनतामा स्वच्छ छवि बनाउनका लागि बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले ठूलै कसरत गर्नुपर्नेछ ।
आपराधिक घटनामा संलग्न भएका प्रहरीलाई किन निलम्बन मात्रै गरेर पुग्छ त ? प्रहरी संगठनलाई राम्रो र अब्बल बनाउनका लागि उनीहरूलाई पदबाटै बर्खास्त गरी कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रहरीले नै घुस खान थालेपछि, आपराधिक घटनामा संलग्न हुन थालेपछि कसले आपराधिक घटना निर्मूल गर्ने ? प्रहरीले कतै आफ्नो पदको र बर्दीको बदनाम गरी फाइदा त उठाइरहेको छैन ?
शनिबार मात्रै महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धका प्रमुख प्रहरी डिएसपी श्यामकुमार राई घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परे ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस घटनाले पनि प्रहरी बदनाम भएकाे छ । शनिबारै बिहान मूलपानीस्थित एक जुवा अखडामा प्रहरीले छापा मार्दा दुर्इजनाकाे ज्यान गएकाे छ, यसमा पनि प्रहरीद्वारा पर्याप्त सुरक्षा रणनीति नअपनार्इ अप्रेसन थालेकाेले विवादित बनेकाे छ ।
‘प्रहरी मेरो साथी’ नारा अ‌ंकित पाेस्टर र ब्यानर जताततै देखेका छौँ । अनि बेला बेलामा प्रहरीले निर्दोष सर्वसाधरणमाथि पनि अनाहक अाक्रमण गर्ने गरेकाे पनि देखेका छौँ । प्रहरीले सर्वसाधारणलाई विनाकारण कुटपिट गरेको भिडियोहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा बेला बेलामा भाइरल हुने गरेको छ । हामीले के बुझ्ने ‘प्रहरी मेरो साथी’ हाे कि ‘सर्वसाधरणमाथि लात्ती’ ? नारामा मात्रै प्रहरी मेरो साथी हुने कि जनताकै साँच्चिकै साथी बन्ने हो ?
‘सत्य सेवा सुरक्षणम’को मूल मन्त्र बोकेको प्रहरी ‘आपराधिक सेवा सुरक्षणम’ नबनोस् । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण, निर्मला पन्त हत्या प्रकरण लगायतका धेरै घटनाले गर्दा प्रहरीमा यस्तो अविश्वास बढेको पाइन्छ। ‘अपराधीलाई समाउन नसके’को आरोप लगाएर जनाताले प्रहरीको सर्वत्र आलोचना गरिरहेका छन् ।
कुनै समय एसियामा अनुसन्धान गर्न अब्बल मानिने नेपाल प्रहरी यतिखेर किन कमजोर देखिँदै छ ? प्रहरीले जस्तोसुकै आपराधिक कर्म या गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्ने जो–कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर प्रहरी सङ्गठनकै आपराधिक घटनमा संलग्न हुन थालेपछि कानुनको दायरामा ल्याउनुभन्दा पनि जोगाउनतिर किन लागेकाे छ प्रहरी ? के याे राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण हाे ? यदि प्रहरी सङ्गठनलाई राम्रो बनाउने हो भने आपराधिक कार्यमा लागेका सबै प्रहरीहरूलाई प्रहरी सङ्गठनभित्रबाटै नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यस्ता सुरक्षा निकायमाथि हुने राजनैतिक हस्तक्षेप र दबाब बन्द गरिनुपर्छ ।
प्रहरीलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिनेहरू होलान् तर सर्वसाधारण जनता भने आतङ्कको कालो बादलमा हडबडाउँदै शान्ति-सुरक्षाको खोजीमा हार–गुहार गरिरहेका छन् । कुनै पनि आपराधिक घटनापछि नागरिकले रिपोर्ट गर्ने भनेकै प्रहरीमा हो । र प्रहरीले नै हाे नागरिककाे जिउ-धनकाे सुरक्षा गर्ने ।
प्रहरीलाई मात्र दोष दिएर समाजका यावत गलत तत्वलार्इ छुट दिन पनि मिल्दैन । हामी पनि विनाबर्दीका प्रहरी हौँ भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन । आपत-विपद पर्दा त्यही प्रहरी हाे चाहिने, सडकमा तिनैमाथि ढुङ्गा मुढा प्रहार गर्ने अनौठो अभ्यास हामीकहाँ हुने गरेको छ । सभ्य मुलुकमा हामीकहाँ जसरी छिसिक्क केही भयो कि सुरक्षा दिन बसेका प्रहरीमाथि नागरिकले ढुङ्गा प्रहार गर्दैनन्, त्यसो गर्नु अलाेकतान्त्रिक मात्रै हाेइन असभ्यताकाे सूचक पनि हाे ।
नेताज्यू, सावधान बाटो गलत छ !
नारायणकुमार घिमिरे शक्तिको विशेषता र प्रयोग राम्रोसँग बुझेका नेताहरू यति भन्दिनुस्– शक्तिको आडमा कानुन र
भारत र चीनकाे चेपुवामा भुटान, तर नेपालको उदाहरण दिँदै जाग्दैछ नयाँ पुस्ता
सुन्दर पहाडहरु र बौद्ध गुम्बा, चैत्यहरुका मनै लोभ्याउने सुन्दर दृश्यहरुका कारण भुटान हरेक यात्रीका लागि
कार्यस्थल नै डेंगु भाइरसको स्रोत, घातक डेंगुबाट यसरी जोगिन सकिन्छ
डा. शेरबहादुर पुन केही दिन अगाडि एकजना डेंगु संक्रमित लेखकको सम्पर्कमा आइपुगेका थिए। संक्रमितका अनुसार
विज्ञापनमा महिलाको प्रयोग : प्रश्न अस्मिता र अश्लीलताको
पुरुषोत्तम पोखरेल बोल्नेको पिठो बिक्छ नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ हुन आउँछ
२२ आश्विन २०७८, शुक्रबार
एमाले अधिवेशन : बाँकेमा छ पालिकामा सर्वसम्मत
सुनको मूल्य घट्याे
विवादमा फसेका प्रधानन्यायाधीश राणाले तोके ११ इजलास
‘आबुधाबी डायलग’मा श्रममन्त्री श्रेष्ठद्वारा श्रमिक पठाउने र लिने देशसमक्ष पाँच प्रस्ताव
गृहयुद्ध रोक्न सत्ता कब्जा : सुडानी सेनाप्रमुख